Matt Bryden oo Cabdiraxmaan C.Shakuur u kireystay inuu ku weeraro Ra’isul Wasaare Rooble – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 21 November 2021 23 November 2021
Siyaasiga u hanqal taagay xilka madaxtnimo ee Soomaaliya islamarkana aan heysan taageerada shacabka Soomaaliyeed ayaa u gacan galay Matt Bryden oo ah malkiilaha Sahan Research oo dowladda Federalka ay dalka ka mamnuucday sanadii 2018-kii islamarkaana dambiyo ka galay dalka oo xabsi 6 sano ah lagu riday.
Bryden ayaa kula heshiiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu weeraro siyaasadda Ra’isul Wasaare Rooble ee dhanka doorashooyinka isagoo soo qoray dhowr qoraal uu Matt Bryden uu u soo qoray.
Waxaa la arkay siyaasiga CC.SH. oo la dhacsanaa hogaaminta Rooble oo mar qura isgediyay markii ay dib usoo laabatay wadashaqeynta Ra’isul Wasaaraha uu la lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo taa oo siweyn uu uga carooday ninka ajnabiga ee Matt.
Waxaa dhanka kale Matt Bryden uu heshiis la galay siyaasiyiin kale oo Xildhibaano ay ku jiraan si ay u dhaliilaan hogaaminta iyo siyaasadda Ra’isul Wasaare Rooble ee xiligan kala guurka ah si dalka ay khalkhal u geliyaan.
Ujeedka ugu weyn ee maanta uu leeyahay Matt Bryden ayaa ah in Soomaaliya ay burburtay maadama dowladda Madaxweyne Farmaajo ay ka xayirtay tubooyin uu ku dhuuqi jiray magaca Soomaaliya taa oo lasoo afjaray hadda.
Hadaba waa kuma ninka cadaanka ah ee Kireystay C.C.Warsame.
Matt Bryden wuxuu ahaa Agaasimihii haayadda Sahan Research ee dalka laga mamnuucay oo uu u sameystay inuu Soomaaliya suurad xun uga bixiyo islamarkana uu dalka magac dilo.
Mar horena wuxuu kamid ahaa qolyaha guddiga dabagalka cunaqabaynta Soomaaliya. Ninkan cadaanka ah wuxuu kamid ahaa qawlaysatadii ku macaashay burburkii dalka hooyo ku yimid, muddo dheer ayuu Nairobi ku faakihaystay hanti dalka loogu talagalay iyo lunsi mashruucyo lagu musuqay Kenya, sida ay warbixinno madaxbannaan sheegayaan.
Waxaan daawaday muuqaalo badan iyo warbixinno saxaafadda reer galbeedku dalka ka samaysay, oo wixii xun oo dhan isaga oo qudha ka warramayo.
Waxaan markii ugu horreysay magaciisa googleeyey, kadib mar aan daawaday dood ay Aljazeera/English qabatay maalmihii dhawayd ee muranka doorashooyinka lagu jiray, wuxuu si ula kac ah weerar ugu yahay milgaha iyo madaxbannaanida dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed.
Ninkan ayaa marwalba ka shaqeynaya sidii uu markale Soomaaliya uga macaashi lahaa kaa oo hadda maxkamadda Gobalka Banaadir ay xabsi ku xukuntay islamarkana hay’adiisa dalka laga mamnuucay balse waxaa nasiib darro ah inuu soo adeegsanayo dad magaca Soomaali wata oo hadana xil doon ah.
W/Q: Mowliid. A.N
Somali journalist laid to rest in Mogadishu